Fetsy tokony ho fantatrao alohan'ny hanaovana ny doka voalohanyo amin'ny Instagram | Famoronana an-tserasera
Judith Murcia | | Tambajotra sosialy, maro
Instagram dia iray amin'ireo tambajotra sosialy miaraka amin'ny zava-dehibe kokoa amin'izao fotoana izao. Ity sehatra ity dia nitombo haingana be nahatratra mihoatra ny Mpampiasa mavitrika 800 tapitrisa. Noho io antony io no manomboka misafidy Instagram ny orinasa ho toy ny filokana ilaina hanaovana dokambarotra.
Hanao fampielezan-kevitra tsara ary hanararaotra Doka ao amin'ny Instagram farafaharatsiny dia tsy maintsy fantatrao ny mampiavaka azy. Fa aloha hanazava ny antony misafidy Instagram izahay fa tsy tambajotra sosialy hafa.
1 Fa maninona no mifidy Instagram?
2 Karazan-doka Instagram
3 Tanjon'ny fampielezan-kevitrao
4 Soso-kevitra hanatanterahana ny doka amin'ny Instagram
5 Tombano ny valin'ny doka nataonao
Fa maninona no mifidy Instagram?
Izy io dia iray amin'ireo sehatra miaraka fitomboana bebe kokoa tato anatin'ny taona vitsy lasa. Anisan'ireo tambajotra sosialy hitantsika Instagram ho iray amin'ireo lehibe indrindra, any Espana dia misy mihoatra ny roa ambin'ny folo tapitrisa mpampiasa mavitrika. Ity tarehimarika ity dia milaza amintsika fa hanome antsika a mahery faobe
Marina fa ny dokam-barotra amin'ny Instagram tamin'ny voalohany dia tsy tena nahalala ny fomba hanaovana azy. Nisy marika tamin'ny alàlan'ny influencer. Tao anatin'izay volana lasa izay dia nivoatra ary miaraka a endrika endrika stratejika sy ara-stratejika kokoa. Ny marika dia manana nahita fahombiazana tamin'ny fanatrarana ireo mpihaino kendreny.
La tanora ny mpanatrika lazainay, ny elanelan'ny fisian'ny lehibe indrindra dia mihodina eo anelanelan'ny 19 sy 25 taona. Tsy tokony hieritreritra isika fa tsy misy olon-dehibe, raha ny marina, mihamaro ny mpampiasa mihoatra ny 30 taona no miditra.
Mikasika ny atiny, dia iray amin'ireo sehatra mandroso indrindra. Nanomboka tamin'ny alàlan'ny fanolorana ny mety hahantona sary fotsiny izy io, tsy maintsy ho efa-joro ny endriny ary azo ampiharina ny sivana. Taty aoriana dia nampiditra horonantsary izy, afaka nampakatra sary mihoatra ny iray toa rakikira iray, dia nanjary nalemy kokoa tamin'ny endrika ny haben'ny sary, ny tantara, ankoatry ny fanovana maro hafa.
Zava-dehibe ny fahafantarana ireo safidy samihafa avelan'ity tambajotra sosialy tanterahantsika ity. Ireto ny karazana doka:
Doka iray sary, izany hoe ireo no doka misy sary.
Doka ho an'ny horonan-tsary, amin'ity tranga ity dia feno kokoa ny fanohananay.
Doka filaharana, mbola fiainam-tsary na horonan-tsary io, hampiasainay izany rehefa mila mampiseho vokatra na serivisy samihafa izahay.
Doka tantara, ity endrika ity dia nahavita ny zavatra niainan'ny fampielezan-kevitray. Tokony hotadidintsika fa ny endrika amin'ny habe sy ny faharetan'ny fotoana dia tsy mitovy. Izy ireo dia tsy maintsy mitsangana ary tsy afaka mihoatra ny 15 segondra.
Anisan'ireo tanjona samy hafa izay azontsika atao amin'ny Instagram Ads dia azontsika atao ny manasongadina ireto manaraka ireto:
Mahazoa fifamoivoizana. Rehefa miresaka momba ny fifamoivoizana dia midika hoe mahazo fitsidihana bebe kokoa avy amin'ireo mpampiasa mankany amin'ny kaontinay. Ny dokam-barotra dia hamily ny mpihaino kendrena mankany amin'ny tranonkalantsika.
Fampitomboana ny fifandraisana, izany hoe, manitatra ny fahitana azontsika ary miafara amin'ny fahazoana valiny biolojika amin'ny sisa amin'ny lahatsoratray. Amin'ity tranga ity, ny mpampiasa dia liana amin'ny atiny.
fiovam-po, rehefa tadiavinay ny mpampiasa mba hanao hetsika toa ny fividianana vokatra, ny fisintomana ny rindranasa, ny famandrihana amin'ny mailaka, sns.
Soso-kevitra hanatanterahana ny doka amin'ny Instagram
Mba hahombiazana bebe kokoa dia holazainay aminao ny sasany soso-kevitra ary amin'izany, mahatratra ny tanjon'ny matihanina. Mba hanatanterahana ny doka ampiasainao ny mpitantana doka izay ahafahanao mamorona doka amin'ny fomba mora lavitra noho izay eritreretinao. Ampiasao ity fitaovana ity hamela anao hamorona karazana fampielezan-kevitra hafa izay tsy misy amin'ny alàlan'ny fampiharana. Ianao dia farito ny mpihaino mikendry ianao, noho izany, hahafahanao manatona mpihaino manokana sy mitovy amin'izany. Ny tahiry rehetra dia ho voatahiry ary afaka manao fampitahana ianao, manisy marika ny sakany, mifanerasera, manisa fananahana, ankoatry ny tombony hafa.
Olona mitazona sary famantarana Instagram
Tombano ny valin'ny doka nataonao
Aorian'ny fandefasana fampielezan-kevitra dia zava-dehibe izany diniho ny valiny azo. Avy amin'ny mpitantana anao no hahazoanao miditra amin'ireo sary fandrefesana valiny rehetra. izany hamela anao handray fanapahan-kevitra amin'ny ho avy araka ny tanjona napetraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny doka voalohany nataonao tao amin'ny Instagram